ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း(UK)တစ်ဝှမ်း ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးဇုန်ကြေညာ - Xinhua News Agency
လန်ဒန်၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (UK)တစ်ဝှမ်း၌ ကြေညာခဲ့သော ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးဇုန် (AIPZ) သည် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ညနေ ၅ နာရီတွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ငှက်မွေးမြူသူများအနေဖြင့် “ဇီဝလုံခြုံရေး သတိပေးချက်များ’’ အား လိုက်နာရန် အစိုးရဝက်ဆိုက်တွင် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။“စကော့တလန်နိုင်ငံ Angus မဲဆန္ဒနယ်ရှိ အဆောက်အဦဝင်းတစ်ခု၌ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး H5N1 ကို အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း’’ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကျေးလက်ရေးရာဦးစီးဌာန နှင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီတို့ ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ “ရောဂါပိုး၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှု” ကိုအတည်ပြုရန် နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဝေလနိုင်ငံ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုအရာရှိချုပ်က ဝေလနိုင်ငံ ၌ “H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ” ကို “ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော ပြင်းထန်သည့် မျိုးကွဲ (HPAI H5N1)” ဟူ၍ အတည်ပြုထားသည့် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
“ယူကေတစ်ဝှမ်း နေရာများစွာရှိ တောရိုင်းငှက်များတွင် HPAI H5N1 အများအပြားတွေ့ရှိရကြောင်း ” ၊ တောရိုင်းငှက်များတွင် ရောဂါပိုး မြင့်မားစွာဝင်ရောက်နိုင်သော (HPAI) တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် H5 အန္တရာယ်မှာ အလယ်အလတ်အဆင့် (ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်) မှ မြင့်မားအဆင့် (မကြာခဏဖြစ်စဉ်) သို့ မြင့်တက်လာကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယူကေတစ်ဝှမ်း၌ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော ငှက်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေးဇုန် (AIPZ) သည် “အိမ်မွေးငှက်များ မပါဝင်ကြောင်း” ယင်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယူကေ ကျန်းမာရေး လုံခြုံရေး အေဂျင်စီ (UKHSA) က ငှက်တုပ်ကွေးသည် “အဓိကအားဖြင့် ငှက်ရောဂါပိုးမွှားတစ်မျိုး” ဖြစ်ပြီး သာမန်ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်သည် “အလွန်နည်းပါး’’ ကြောင်းဆိုသည်။
ယင်းတုပ်ကွေးသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကပ်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဗြိတိန်၌ နောက်ထပ် COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၄၁,၂၉၉ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် သေဆုံးသူ ၂၁၇ ဦးထပ်မံ ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း နိုဝင်ဘာ ၃ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ (Xinhua)
LONDON, Nov.3(Xinhua) — An Avian Influenza Prevention Zone (AIPZ) has been declared across the United Kingdom (UK) effective5p.m. on Nov. 3, legally requiring bird keepers to “takearange of biosecurity precautions,” the government website said on Wednesday.
“There have been multiple findings of HPAI H5N1 in wild birds from sites across the UK,” the statement said, as the risk of incursion of highly pathogenic (HPAI) avian influenza H5 in wild birds has increased from medium (event occurs regularly) to high (occurs often).
The AIPZ currently in force across the UK “does not includearequirement to house birds,” although it is being kept under constant review, the statement said.
The UK Health Security Agency (UKHSA) has said that avian influenza is “primarilyadisease of birds” and the risk to the general public’s health is “very low.”
Another 41,299 people in Britain have tested positive for COVID-19 and the country also reportedafurther 217 coronavirus-related deaths, according to official figures released on Wednesday. Enditem